Torohevitra mafana avy amin'ny Semalt amin'ny fomba hanakanana ny spam referrer avy amin'ny rakitra ao amin'ny rakitrao
Antsoina hoe spam log, ny spam referrer dia teknika spamdexing izay mampiditra ny fangatahana tranonkala maro amin'ny fampiasana ny URL referrer diso. Ny mpampiasa spam dia mampiasa URL ny adiresy sandoka mba handefasana fangatahana amin'ireo tranonkala tiany hampirina. Any aoriana any, ny mpitsoa-ponenana dia mamarana vola be dia be amin'ny vidin'ny dokam-barotra.
I Ivan Konovalov, mpampiasa Success Success Semalt , dia milaza fa ao anatin'ny tontolo maoderina momba ny votoaty sy ny marketing ara-nomerika, dia mitatitra isan'andro ny habetsaham-pitenenana sandoka. Rehefa tapitra ny fikandrana ny rakitra famakianao dia mamoaka spam-na tsy misy ilana azy ny spam. Raha mahakasika ny varotra dizitaly, ny rakitra log dia milalao andraikitra tena manan-danja amin'ny fanampiana ireo webmasters mba hamakafaka ny isan'ny mpanjifany mitsidika ny tranokalany sy ny fotoana maharitra.
Ahoana ny fomba fitsaboana spam
Miharihary ny fandraisana ny Google amin'ny spam referrer. Ny lisitra ho toy ny teknolojia mainty hoditra, Google dia manameloka ireo webmaster sy mpitoraka bilaogy manararaotra ny tranonkalan'ny referrer mba hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny tranonkalany sy ny laharana ambony amin'ny algorithm. Tao anatin'ny lasa vao haingana, mpitoraka bilaogy sy webmasters sasany no nampiseho ireo mpanelanelana amin'ny pejy tsirairay ao amin'ny tranonkalany. Noho ny antony fantatry ny mpamaham-bolongana dia lasa ampahany manan-danja amin'ny tranonkala maro ny lisitr'ireo mpamily vao haingana.
Ireo mpitsidika dia manangona ny votoatin'ny pejy tsidihin'izy ireo isanandro noho ny fanasokajiana azy. Ny isa maromaro amin'ny sehatry ny fikarohana dia mampiasa populaire mifandray amin'ny rohy mba hamorona tranonkala ho an'ny teny fanalahidiny miovaova. Ny Webmasters sy ny mpitoraka bilaogy dia manararaotra ny toe-draharaha amin'ny fiheverana fa manampy trotra ny vidiny ny rohy URL misy ny referrer ao anatiny..Miaraka amin'ny tanjon'ny fampitomboana ny fifamoivoizana amin'ny tranonkalany, dia mampiasa rindrambaiko ihany koa ny mpizahatena mba hitsidika pejy sy tranonkala mampiasa lohapejy referrer.
Ireo mpitsoa-podiarana sandoka dia mamoaka tatitra manazava ny fomba mety hahitan'ny mpiserasera pejy, faharetan'ny fotoana ary ny isan'ny mpitsidika. Amin'ny maha-mpandraharaha ara-barotra anao, dia mety ho tonga ianao hahita ny lozam-pifamoivoizanao mihintsan-dravina noho ny fampiasana spam log. Amin'ny ankabeazan'ny trangan-javatra dia nesorin'i Google tanteraka ny webmasters amin'ny fampiasana karazana hoditra mainty sy teknika avy amin'ny lozam-pikarohana karazana.
Fanesorana spam referrer avy amin'ny rakitra ao amin'ny rakitrao
Mampiasa ny log de référence non-indexable
Ny mpampiasa webmasters sy ny mpandraharaha mavitrika dia manana ny fomba tiany indrindra hanesorana spam referrer. Ny fampiasana ny tsy fandefasana finday tsy indexable dia ny tsotra indrindra. Aza aseho na asio mpanondro amin'ny pejy rehetra hita ao amin'ny tranonkalanao. Raha tsy tafiditra ao amin'ny pejin'ny tranonkala ny fampidiran-tsofina referrer, ny fitaovam-pikarohana dia hasaina handefa ny kaontinao fanovana.
Fampiasa ny rakitra .htaccess
Raha efa namantatra URL iray mampiahiahy ianao ao amin'ny tranonkalanao, eritrereto ny hanomezanao ny tahiry fikirakirana .htaccess. Ity rakitra fanoratana ity dia tsotra fotsiny ary manakona spam log amin'ny tranokalanao. Mba hamoahana ny rakitra .htaccess eo amin'ny tranokalanao dia andefao Apache amin'ny mod-rewrite. Ny webmasters mampiasa ny .htaccess dia afaka manakana ny spam avy amin'ny pôrnônjy, filokana, bola na toerana hafa manokana.
Ny teknika sasany dia novolavolaina mba hanampiana ireo bilaogera sy mpanafika hanakana ny spam. Ny fametrahana ny antontan-taratasy fikirakirana .htaccess sy ny tsipika fanovozam-pejy tsy miasa dia miasa tsara ho an'ny webmasters maro sy mpizara dizitaly. Aza avela ny spam referrer mba hamoahana ny rakitra an-tsoratry ny rakitrao. Ampiasao ireo teknika voalaza etsy ambony mba hanakanana ny spam referrer Source .